Datsun expands its African footprint to Zimbabwe – The Guardian
Datsun, yesterday, announced that it is expanding its footprint on the African continent with the launch of the Datsun range in Zimbabwe.
Des Fenner, General Manager for Datsun South Africa, says: “These are exciting times for Datsun and we are very proud and privileged to expand the brand beyond our South African borders.
Datsun has always been committed to providing cars that are reliable and attractively priced and we are pleased to be able to provide this offering to consumers in Zimbabwe.”
“We are hopeful that Zimbabwe will become a key market for our vehicles on the continent.
At the core our goal is to deliver new and exciting products that meet local customer needs,”says Fenner.
Highlanders coach impressed despite loss
‘We need Kenneth Kaunda’s spirit in this country,’ says Zim’s Mugabe